Erga Oromoon Gumuzi Keessa jirachuuf Mirga dhabee Oromiyya keessa Tigiroon atataman ba’uu qabuu !!!
“Rakko Oromoo irra ga’uu Median Habasha gutuman gutuuti gabasuu erga dhisee wagoota heeduu lakkobsisee jira. Baratotaa University Oromoo irrati yaakaa dalagamuu Habashoon waan gamachuun fudhatan fakkata. NGO Habasha Ilee wayee Baratoota Oromoo dubatan hin beekan. Isaafi gamachuu waan ta’eef waan irra enub hin jiru. Kan nu dhibee jiru garuu garuu TPLF dullaa ini Oromoo irrati banee jiruu Media Oromoo caalisuu isaanti. Olola fi Waldhabdee dhabinee Oromoo afarsuun kan beekaman website Oromoo wari ofiin Jeedha dulaa Annaa Qumbi Hararge fi Manasibu Irrati Goodhamee akka Nama hin dhageenyeti caliisan duaruun isaan. Mediale akkasi durii iyuu kan ijaraman Oromoo giduuti Olola gegessun nu diiguuf malee ummataa Oromoo sagalee ta’uuf miti Kanaafuu dhimii kun kara gummii paarlamaa Oromoo ibsii tokko akka itti nu keenamuuf gafana. “ Gaafi uumataati
Maqaan namoota Qalaman Aannaa Manasibuu Dabala jira.
Oromoo 300 Gumuzi Bishanti Naqixee ama ilee hin Argamnee uumata Manasibuu
Obbo Malkamuu Tujuba Bulchan Manasibu Bayiina Namoota du'aan Sirrti Maliif VOA ti dubatee jeechudha ergamtoon Habasha Zoni irra dhufan Oganumaa irra sii ari’ana jeechuun dhadatani deemaan. Guyya gafaa Dafanoo jalqbee Barasisisoon fi Baratooni Hundi Barumsa fi Hojii dha...buun Goocha Zooni Lixaa welegga mormii goochuun Gumuzi lafa Oromoo irrati akka Hindabaree
Arman dura danta dhunfa danta saba kan durse lamesa Itana kan jedhamu to'ana jala galu isa hubatamera haa ta'u male gochota hin tane ilman oromo irrati gessisera isan keessa murasni lafa oromo danga oromiyafi beneshangul gumuz gidduti argamu qarshin
Gurguratera kan malese namota bayye kan hisise kan darara hin tanef kennera amma immo walit buinsa ummata oromofi ummata gumuz gidduti ta'e nan ararsa... jedhe warqe tilmaman qarshi 92000 ta'u fudhate ummata walit direra kanafu duguginsa sanyi dhala nama .
Yakkamtoon Kun Malaqa Fudhatan lafa Oromoo gurgurachuu isaa caalaa Of madaa rakkoo fi mana jeequmsaa utuu ta’aan jira. Abba Ganda Nama mirga oromoo fi lafa Oromoof falmatee yaakama goodhan Uumata nuti kakaftee jeedhan hidhan jiru.
Aberash Gamachuu Dubarti Ulfana Qalana Ulfa gara basan ajeesa
Ilifituu Hambasa dirqisisan waloon nama 15 ta’aa sagagaluma yaakaa ta’ee irrati irrati raawwacuun qama hirisan jiruu.Maqa namoota wareegamani fi manni isaan gubate hunda Kun wara Beekaman Qoofa kan Bakka Buteen isaa dhabamee fi bisha seenan bayiin isaan hin baramnee.
Maqa Namota 15: Tamasgeen bula abba ijoolle 6.aanaa jaarso irra, Waanna tariku, Yohaanis fiqadu, Faqqade tarfa, Haayilu gammachu, Yosef soboqa, Diriba barkessa. dhalootan Qararo guta yammu ta'an naannoo warqee laga abeetuu iddoo jedhamutti gomboo xayiba irra, Gergis Galata aana najo irra jireenya barbachaf iddoo sana kan deeman, Hayilu, Faqada , Yowaanis abdata cafcafii danboora irra, Dabala indalu gaanbaa qannoo Haro gonbii irraa warra qalamaniidha., ABDISA OLANI KANI Ganaba Qannoo, Abrash Gamachuu Dubarti Ulfana Qalana Ulfa gara basan ajeesan
Kan reebichafi waraansi irra ga'e: Obbo Daraje fida qararo guta irra, obbo waqgaarii tarfa gunfii irraa , Addee Ilifituu Hambasa dirqisisan waloon nama 10 ta’aa sagagaluma yaakaa ta’ee irrati irrati raawwacuun qama hirisan jiruu. Dubarti tokko kan ammaaf maqaa ishe hin arganne nama torba tahaan tara tara wal jijjiru gochaa sagaagalumma irratti geggessuun ajjeesan dubartii ulfaa tokko gara itti baatu dhabdee utuu mixattu shukkaan garaa tarsaasuun ajjesan maqaa isaani qoracha jirra hin gabaasna
Warra manni isaani gubateefi qabeenyi isaani saamame
Qajela Yadasa, Isira'el molatu, Dhufeera waaqgaarii, Malkamu mirate, Fayyaasaa haayilee, Abbabe olana, Beekama caalaa, Abaate caalaa, Olaana gurmesaa, Abdisaa gurmessa.
gargaarsa tokkolle kan hin arganneedha naannoo dangii irraa immoo Asafa Biraasaa abba ganda sanaa kan tahe dangaa lafa keenya akkamiti sarartan jechuun Nama 41 tahanii mandii dhufanii gafatanii deebii dhabanii Ginbii demanii iyyatanii atattamaan akka sirreesan ajaja mandiitti baafnaan isintu nama nurratti kakase jechuun torban tokko hidhamee mirga wabiin ba'e.
Ajeeftee du’aaf Uf qoophesii Bisha lixee du’uu mana Dubartiin Oromoo Ulifa garan ishee Tarsayee ajjefamtee dhiirii manati deebiyee cisuu dubartii Mana basuu qabdii.Dhiirr Oromoo galee mana Cisuu hin qabuu. Dhiiri Oromoo mana isaa Keessa Eboo, Gajara, Gajamo fi Albee, Hin qabnee dubartiin mana basuu qabdii. Kun gadamuudhadha.
Uumaatii Mana Kumii 300 ta'ee Gumuzi 50 ari’uuw dadhabna kun diirumaa miti Kitaba Qulquluu lafa ka'aati Gajara bitadha diina of irra halee. OPDO fi Tigigre Finfinneeti dhuftuu konkolata ishee waliin guba. Gumuzi Gurcha Kara Adeemti akka lubun hin galee Goodha
Habasha isiin keessa jirtu Gurage, Tigire fi Amhara Mana isaa hin lixina, irra hin bitana itti hin gurguriina, hin dubsina konkolata isaan hoteela fi mana dhugatii isaan hin seenina, . Jarii diina Oromooti du’aa Oromooti gamada jiru waan ta’ee.
Erga Oromoon Ganda isaa Odaa Goodaree, Dalatii, Gunfii fi Wadessa keessa akka qabeenya isaa dhisee ba’uu goodhamee, Mootummaan Oromoo fi Mootummaan Federala goochan kun akka seera qabeessati erga mirakeesee. Gutuumaa Oromiyya keessa kan jiratan lamiin Tigre, Amhara, Gurage fi kan biroon atataman akka ba’aan kana irra kanafi tarkanfi Oromoo irrati fudhatamee fudhachuu qabana jeechuun uummanii gaafi kassa jira. Nu erga mootummaan nannoo Oromoiyya fi Mootumman Federala Mirga Oromoo kabachisuu dhisee reefi Oromoo bineensi nyatee Tarkanfi Uumani Oromoo fudhatuu ni degera.
. Gumuzi bakka argamanti Konkolata irra fudhaman murtii Uumataaf akka dhiyyatan daragoon Oromoo murteessan jira.
• Obbo Malkamuu Tujuba haqa dubachuu isaati dorsisa fi dhibaan irrati ga’eef mootummaan Bulcha Manasibuu dhifama gafachuu qaba.
• Asafa Biraasaa abba ganda fi namoon 41 lafa Oromiyaa Gumuzi maliif fudhati waan jeedhamanf hidhamuun isaan siiri waan hin taneef gadii dhifamuu qabuu.
* Namoota Aanna Manasibu irra Hidhaman: Bula Qixata, Olana Cherineti, Yaiko Isyaki, Qilxu karaa fi ganda Gombi irra Dhibataman hidhaman kan jiran yeroo ta’u maqan isaan nu hin qaqabnee.
• Mootumaani Federala darargagoo Q/kaaraa guuree hidhee haaalaa duree tokko malee hidhatii gadii dhisuu qabuu. Aanna Kiltu Kara irra Telen hin buuqifamuu jeechun Falimi ture irrati muca wagga 15 Gutee Balay, Ebba, Falmaata fiqadu, Qannoo imiruu, Dagim Makoo, Dawwiti , Daagim, Gaammachis, Taariiku, Amaanti, Rooba.
*. Oromoo Irrati Saba fi sabilamii hunda irrati dulchisan of ararsa ta’uu;
*. Baratoota Oromoo Qaroo ta’aan University hunda keessa ariacha jiruu.
*. Qootatee bula lafa irra buqisani kulii goodhatan jiru lama akka hamilee hin qabaneeti;
*. Shamaran Oromoo Oromoo ji’aa ji’an 50,000 biyya arabati gurgurachuun malaqa gurtuu Oromon hamilee cabsuu ;
*. Beeka Oromoo Hoji dhorkachuu samuu isaa garboomsuu;
• Namoon Gumuzi irra argiaman Haala duree tokko malee mana isaanti deebiyuu qabuu:
• Reefi Oromoo kabajan Oromiyaati galee akka awalaluu yaaka warii dalagee Iffati Seerati dhiyaachuu qabuu:
• Kun ta’uu banan Oromiyya gutuuti Barumsii fi Hojiin dhabatee Mirga Oromoo Hirira fi fincilaa wali irra hin ciinee gochuun soochi Musilima Oromoo wal fakatuu goochuuf murteefanee.jira.
* Erga Mirgi Oromoo Gumuzi keessati hin kabajamnee lammiin Biroo Oromiyya keessa jiratu atataman Oromiyya gadii dhisee ba’uu qaba.
Uuuuu imimmaan arcaasa haattikiyya dubata jirtii dacheeni Oromiyaa
Gaafi Uumta Nu ga'ee Qundeesine dhiyeesine